Amazon Music Unlimited saika maimaimpoana: 4 volana amin'ny 0,99 euro | Androidsis
Efa akaiky ny sakafo hariva Taom-baovao. Afaka ora vitsivitsy dia hankafizantsika ny iray amin'ireo alina mahatsikaiky indrindra amin'ny taona, izay hankalazantsika ny fahatongavan'ny Taom-baovao. Ary toa natsipin'i Amazon teo am-baravarankely ny trano, ahafahantsika mankafy ny serivisy mozika mivantana amin'ny vidin'ny tantara ratsy. Eny, afaka manakarama ianao izao Amazon Music Unlimited mandritra ny efa-bolana dia kely noho ny vidin'ny kafe.
Eny, ny fivarotana an-tserasera dia nanangana fampiroboroboana hahafahanao manao fifanarahana Amazon Music Unlimited mandritra ny efa-bolana amin'ny 0,99 euro ihany. Sary vazivazy izay manolotra ny lokon'ny mofomamy ho an'ny rehetra fampiroboroboana azo atao amin'ireo daty noely ireo.
1 Ankafizo ny Amazon Music Unlimited efa-bolana raha tsy latsaky ny 1 kafe
1.1 Makà Amazon Music Unlimited amin'ny vidiny mirary
Ankafizo ny Amazon Music Unlimited efa-bolana raha tsy latsaky ny 1 kafe
Miresaka serivisy iray izay manana lalana maherin'ny 50 tapitrisa izahay, noho izany dia zava-misy fa Amazon Music Unlimited dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra Spotify. Lazao fa, manana ny mpanakanto fanta-daza indrindra ny tolotra mozika ataon'izy ireo mivantana. Ary tsia, tsy mila miaritra ilay dokam-barotra manelingelina ianao, satria amin'ny 0,99 Euros monja dia hanana efa-bolana ianao.
Ho fanampin'izany, tokony homarihina fa ny Amazon Music Unlimited dia hamela anao hankafy ny serivisy feno mandritra ny 4 volana latsaky ny 1 euro, saingy tsy mitaky anao hanao sonia karazana faharetana izany. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mampiasa ity mpifanandrina Spotify ity mandritra ny efa-bolana maharitra ny fampiroboroboana ary avy eo misoratra amin'ny serivisy.
Ny zavatra tokana tsy maintsy tadidinao fa ity safidy ity hanana Amazon Music Unlimited maimaim-poana (satria 0,99 euro tsy vola) mandritra ny efa-bolana, dia ho hita amin'ny 6 Janoary ho avy izao. Noho izany, mila maika ianao alohan'ny hamarotana ny fisondrotana Krismasy tsara indrindra!
Makà Amazon Music Unlimited amin'ny vidiny mirary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fanomezana faran'ny taona tsara indrindra: Amazon Music Unlimited 4 volana latsaky ny 1 euro
Manana telefaona Android taloha be ve ianao? Manao veloma ny WhatsApp